Nhau - Makomborero eCa Zn Stabilizer
Parizvino, PVC kupisa inodzikamisa inonyanya kusanganisira lead salts, inoumbwa calcium uye zinc, organic tin, organic antimony, organic yekubatsira yekupisa inogadzirisa uye isingawanzo epasi makomponi. Iyo hombe kuburitsa ndeye yechinyakare inotungamira munyu inogadzikana uye Ca Zn inosanganiswa inosimbisa.
Ca Zn inosimudza yakasvibirira uye inoshamwaridzika nharaunda isina inorema simbi zvinhu, senge lead uye separator.Inogona kusangana nezvinodiwa zveazvino kuchengetedzwa kwenzvimbo zviyero munyika dzakasiyana siyana.
Ca Zn inogadzikana inopesana nekusvibisa kwehutachiona. Ca Zn inosimudza ine yakanaka sisitimu yekuchinja hunhu. stabilizers, uye mutengo wekuchinja wakaderera.
Kuwanda kweCa Zn kudzikisira kwakaderera, uye huwandu hwecalcium carbonate hunogona kuwedzerwa zvakakodzera kudzikisa mutengo. Inofananidzwa neyakaunganidzwa inotungamira kupisa inodzikamisa, kuwanda kweiyo Ca Zn kupisa inodzikamisa inenge 40%.
Aimsea inyanzvi yepamusorosoro bhizinesi rinotungamira mukubatanidzwa kwekutsvagisa, kugadzira uye kutengesa kweasina-chepfu zvakatipoteredza zvine hunyanzvi PVC zvinodzora.
Iwo ekudzikamisa anoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa zvePVV, senge waya netambo, zvekushandisa zvekurapa zvekutambisa, zvigadzirwa zviri pachena, zvigadzirwa zvecalendered, zvigadzirwa zvepaipi, machira ekushongedza, shangu dzakapupuma, musuo uye windows profiles, nezvimwe.
PVC yokuvirisa, Pvc Imwe Pack Inodzikamisa, Pvc Heat Inodzikamisa, PVC Stabilizer, PVC Kupisa Kunodzikamisa Flexbile, PVC Isina-Inotyisa Stabilizer,